Soo degso Agusta Westland EH101 v2 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 34 467
Kaliya la jaan qaada FSX Dardar-gelinta ama P3D ilaa v3. Helikobtar dhameystiran oo aan ka hor imaanayn tan caadiga ah ee EH101 laga bilaabo FSX-Aq.
EH101 waa mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee adduunka ugu fiican, laakiin Microsoft ayaa waxba kama dadaal badan oo model uu sidaasi ku seegayaa badan. helicopter ayaa su'alaha si ay u sida ugu dhow ee suurto gal ah in dunida dhabta ah.
* Ha iloobin in ay ku riday shidaalka ee saddexda taangiyada
ortherwise helicopter nott doonista bilaabi *
Wax ka yar 17 horumar ayaa laga sameeyey tan add-on. Waa kan liiska:
1. Su'alaha diyaaradaha dhaqdhaqaaqa duulimaadka qaabeynta lagu xasilinayo dhowdahay engine in dhacdaa la diyaaradaha caadiga ah ee.
2. Su'alaha file hawada si uu u sameeyo diyaaradda xamili dheeraad ah xaqiiqda.
3. Added labo ka mid ah nalalka degtey on the struts dambe helay ku shaqeeya Asian iyo SOP of diyaaradaha.
4. kulaylka Added iyo saamaynta dhammayn dhammaan saddex matoorada.
5. Added strobes cusub oo muraayad u ah in labanlaab flash off jirka ah ee diyaaradaha.
6. Added laba naadi ka shaqeeya in ay ula socdaan doonaa diyaaradaha. 1st Duuliyayaasha ka radar ayaa raad for diyaaradaha oo kaliya. 2nd ee Radar Co-Duuliyayaasha ayaa raad ee garoomada diyaaradaha, dhulka dhul ballaaran ka dib, diyaaradaha, NDB ee,, ID garoonka VOR ee
7. Added gacanta ku Radar labada nidaam gudahood VC ah.
8. Added fududahay in la akhriyo screens MFD iyo PFD
9. engine Moved to heerka hoose ka akhriso cabirrada
10.Added HelMet Mount Display (HMD ama HmountD) la mouse shido clickable la groundspeed in akhriyi doonaa in negative (beddeli) duulimaadka iyo saacad alaabada.
raadiyayaasha 11.Added (Default 300 dheeraad ah)
arbushin 12.Added ilaa GPS
arbushin 13.Added kor eeg gacanta albaabka, waayo deg deg ah ay helaan diyaaradaha.
arbushin 14.Added kor ku biiro iftiinka.
15.Added beddelaan-awoodi habka digniinta dhulka u dhow cod la heegan dabka, hoos u rotor / heegan sare, hoos heegan qaadee, heegan sare
16.Added eeg auto-dulsaar.
17.Added gacanta radar pop-up for nidaamka track dhulka
Fiidiyowga EH101 sida caadiga ah laga bilaabo FSX Dardar-gelinta:
Qore: Microsoft, v2 waxaa qoray David Robles